Amanqaku kaTim Hickle Martech Zone |
Amanqaku ngu UTim Hickle
Ngemvelaphi eyahlukeneyo ukusuka kuqoqosho ukuya kumdlalo wokuhlekisa, uTim Hickle ufumene ikhaya elihle kwindawo yentengiso yedijithali. Namhlanje, uTim liQhinga leNtengiso yeDijithali yeeMayile zoyilo. Eyona njongo yakhe iphambili kukunceda inkampani ethengisa uphawu ekhulayo ukuba yakhe uluhlu lweenkonzo zedijithali ezijikeleze ubuchule bakhe, kubandakanya ukuthengisa ngaphakathi, ukukhulisa i-imeyile, kunye nentengiso yoluntu.
Ukuba ufuna ukudibanisa, zive ukhululekile ukudubula uTim nge-imeyile kuTimHickle@gmail.com okanye uqhagamshele kuTwitter @TimHickle
NgoLwesine, Aprili 16, 2015 NgeCawa, nge-15 kaJanuwari 2017 UTim Hickle
Ngeendlela ezininzi, konke oku kuxhomekeke ekubeni ngubani umthengi wakho kwaye luyintoni uhambo lwabo. Wonke umntu uyazi malunga ne-Snapchat okwangoku, akunjalo? Ukhona umntu osebumnyameni kule? Ukuba kunjalo, nantsi into ekufuneka uyazi… Yenye yezona ndawo zidumileyo zonxibelelwano phakathi kwabaneminyaka eli-16 ukuya kwengama-25 ubudala, kufanelekile ukurholwa ngama- $ 5 Billion, kwaye kuvakala ngathi akukho mntu wenza imali ngayo. Ngoku, inxalenye ye-